Fanangonana zavakanto illy vaovao nosoniavin'i Mona Hatoum natombok'i illycaffè
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fanangonana zavakanto illy vaovao nosoniavin'i Mona Hatoum natombok'i illycaffè
illycaffè dia manolotra ny illy Art Collection vaovao ary, sambany, kapoaka voaravaka vita sonia nosoniavin'i Mona Hatoum.
Miaraka amin'ny haitao kanto izay mandritry ny efapolo taona, Mona Hatoum mpanakanto mpahaita dia ekena iraisam-pirenena noho ny oeuvre ara-tononkalo sy ara-politika, izay azo tsapain-tanana amin'ny haino aman-jery maro karazana sy matetika tsy mahazatra, anisan'izany ny fametrahana, sary sokitra, horonan-tsary, sary ary asa an-taratasy.
Hatoum dia nanjary fantatry ny be sy ny maro tamin'ny tapaky ny taona 1980 tamin'ny seho an-tsehatra sy sary mihetsika izay mifantoka tanteraka amin'ny vatana.
Hatramin'ny fiandohan'ny taona 1990, ny asany dia nifindra nankany amin'ny fametrahana sy sary sokitra marobe izay mikendry ny hampifantoka ny mpijery amin'ny fihetsem-po mifanohitra amin'ny faniriana sy ny fanakorontanana, ny tahotra ary ny fientanam-po.
Nanomboka teo dia nanohy namolavola fiteny iray izy, izay ahalalana ireo zavatra mahazatra sy an-trano isan'andro dia avadika ho zavatra vahiny, tsy azo antoka na mandrahona.